လူတွေဟာ ရှေးပဝေသဏီကတည်းကပင် သဘာဝထုတ်ကုန်တွေကို အလှအပဆိုင်ရာကုထုံးတွေအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ရှေးခေတ်အိန္ဒိယမှာဆိုရင် ဆံပင်တွေကို အဆီထည့်ခြင်းဖြင့် ဆံပင်တွေကိုသန်မာအားကောင်းသောနည်းလမ်းတွေကို ဒီကနေ့အထိအသုံးပြုနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆံသားတွေကို အားဖြည့်ပေးပြီး သန်စွမ်းစေပြီး ပိုထူလာပြီး ပိုနူးညံ့စေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဆံသားတွေကို ပြောင်ပြောင်လေးဖြစ်နေစေဖို့ တစ်ခြားအသုံးပြုလို့ရနိုင်မယ့် အစားသောက်ထုတ်ကုန်တစ်ချို့လည်းရှိနေပါသေးတယ်။
ဟုတ်ကဲ့။ ဒီကနေ့မျှဝေပေးချင်တာက ကျွန်မတို့ရဲ့ အဘိုးအဘွားတွေအသုံးပြုခဲ့ကြပြီး သူတို့ရဲ့ အလွန်ကောင်းတဲ့အကြံဉာဏ်တစ်ချို့ကို မျှဝေပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ ဆံပင်တွေအတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေဖြစ်မှာပါ။
ပရိုတင်းများစွာပါဝင်သော ကြက်ဥတွေကို စားသုံးပေးခြင်းဖြင့် ကျွန်မတို့ဆံနွယ်တွေရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ထိန်းသိမ်းပေးပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကြက်ဥကို အသုံးပြုပြီး ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းနှင့် ဆံပင်အဖျားကွဲခြင်းကို ကာကွယ်တားဆီးပေးနိုင်ပါတယ်။ ပျက်စီးနေသော ဆံပင်တွေကို ပြန်လည်အစားထိုးနိုင်ပြီး ဆံပင်အရှည်မြန်ဖို့အတွက် မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကြက်ဥအကာကို သူတစ်မျိုးတည်းဖြစ်စေ (သို့) တစ်ခြားပါဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဖြစ်စေ လိမ်းနိုင်ပါတယ်။
ကြက်ဥနှစ်လုံးကို ယူပါ။ အနှစ်တွေကို ချန်ပြီး အကာတွေကိုပဲ ယူပါ။ အကာတွေကိုပဲ လိုအပ်ပါတယ်။
အုန်းဆီ စားပွဲတင်ဇွန်း (၂) ဇွန်းထည့်ပါ။
ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကို ရောမွှေပြီး ဆံပင်တွေကို စိုစွတ်အောင် သုတ်ပေးပါ။
မိနစ် (၂၀) ကြာအောင် ထားပါ။ နောက်ဆုံးမှာ ရေအေးနဲ့ ဆေးချပါ။
ရှားစေားလက်ပတ်ကို သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးနှင့် အသားအရေအသွင်အပြင်အတွက် ကောင်းကျိုးများစွာရှိတာကြောင့် ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင် သုံးစွဲခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဆံပင်အဆီပြန်ခြင်း၊ ဘောက်ထခြင်း၊ ဆံပင်ခြောက်ခြင်းနှင့် ကြွပ်ဆတ်ကျိုးပဲ့ခြင်းတို့အတွက် မရှိမဖြစ်ကောင်းမွန်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ ရှားစောင်းလက်ပတ်ဆိုတာ ဆံပင်တွေကို အစိုဓာတ်ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်သလို ပိုသန်မာခြင်းနှင့် ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုပုံကို ကြည့်ရအောင်ပါ။
ရှားစောင်းလက်ပတ် စားပွဲတင်ဇွန်း (၂) ဇွန်းကို ပန်းကန်တစ်လုံးထဲထည့်ပါ။
သံလွင်ဆီ စားပွဲတင်ဇွန်း (၁) ထည့်ပါ။
ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကို ရောမွှေပြီး ဆံပင်အလယ်လောက်ကတည်းက လိမ်းချပါ။ ဦးရေပြားပေါ်မှာ လိမ်းပေးပါ။
ဆံပင်ခြောက်သွေ့ခြင်းအတွက် မိနစ် ၃၀ ကြာထားပြီး ဆံပင်တွေကို လျှော်ပါ။
ထောပတ်သီးမှာ သဘာဝအဆီ၊ ကျန်းမာစေသောအက်စစ်အဆီ၊ ဗီတာမင်နှင့် သတ္ထုဓာတ်များစွာ ပါဝင်တာကြောင့် ဆံပင်တွေကို အာဟာရဖြစ်စေပြီး ကျိုးပဲ့ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ၎င်းက ရေဓာတ်ချို့တဲ့နေတဲ့ ဆံပင်တွေအတွက် အထူးအကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။
rosemary ဆီ စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ ဇွန်းနှင့် အုန်းဆီ ၁ ဇွန်း
၁၀ မိနစ်ကနေ ၂၀ မိနစ်အထိ ဆံပင်မှာ လိမ်းထားပြီး ရေအေးနဲ့ ဆေးပါ။
ဆံပင်ကို ထိန်းသိမ်းတဲ့နေရာမှာ အုန်းဆီကိုအသုံးပြုခြင်းက အစိုဓာတ်ဖြည့်ပေးခြင်း၊ ပရိုတင်းဓာတ်ဖြည့်ပေးခြင်းနှင့် ကျိုးကြေခြင်းကနေလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ခေါင်းမလျှော်ခင် အုန်းဆီကို လိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။ သို့မှသာ သင့်ဆံပင်ကို ရေမြောက်များစွာစုပ်ယူခြင်းကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ခေါင်းလျှော်ပြီးချိန်မှာလည်း လိမ်းနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းက ဆံပင်ပိုနူးညံ့စေဖို့နှင့် ကျိုးပဲ့မှုလျော့နည်းစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ငှက်ပျောသီးမှာ silica ပါဝင်တာကြောင့် သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ် collagen ပိုမိုထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပြီး ဆံပင်တွေကို ပိုထူပြီး ပိုသန်မာစေပါတယ်။ သူတို့ဟာ သင့်ဆံပင်တွေကို နူးညံ့စေပါသေးတယ်။
ငှက်ပျောသီး ၂ လုံး(သို့) ၁ လုံးကို ပန်ကန်တစ်လုံးထဲ ထည့်မွှေပါ။
အုန်းဆီ ၁ ဇွန်းထည့်ပါ။
ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကို သမအောင်မွှေပြီး သင့်ဆံပင်နေရာအနှံ့ လိမ်းနိုင်ပါပြီ။ ၁၀ မိနစ်ကနေ ၁၅ မိနစ်အထိထားပါ။ ပြီးတာနဲ့ လျှော်ပါ။
Oatmeal မှာ အမျှင်ဓာတ်များစွာပါဝင်ပြီး သင့်ဆံပင်တွေကို အစိုဓာတ်ထိန်းပေးခြင်းနှင့် ကြီးထွားခြင်းကို မြှင့်တင်ပေးပါတယ်။ ဆံပင်ပိုထူဖို့လည်း အာမခံနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းကို ဆံပင်မှာ ဘယ်လိုပေါင်းတင်ရမလဲ?
ဂျုံ စားပွဲဝင်ဇွန်း (၃) ဇွန်း
နွားနို့ ဖန်ခွက် တစ်ဝက်, အုန်းဆီ တစ်ဇွန်းနှင့် ပျားရည်တစ်ဇွန်း
ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကို ရောနှောမွှေပြီး ဆံပင်နေရာအနှံ့လိမ်းပေးပါ။ ဦးရေပြားမှာ နှိပ်နယ်ပေးပါ။
မိနစ် ၃၀ ကြာလိမ်းထားပြီး ဆံပင်ကို သင့်ရဲ့ ရှန်ပူနဲ့ လျှော်ပါ။
ပျားရည်မှာပါဝင်သော ဗီတာမင်ဓာတ်နှင့် သတ္ထုဓာတ်တွေနှင့်အတူ antioxidant ဂုဏ်သတ္တိအပြည့်အဝပါဝင်တာကြောင့် ပုံမှန်အားဖြင့် ဆံသားတွေကို ကျန်းမာစေပါတယ်။
ပျားရည်ဖန်ခွက် တစ်ဝက်နှင့် သံလွင်ဆီ ၄ ပုံ၁ ပုံကို ဖန်လုံးထဲ ထည့်ပါ။
ရောမွှေပြီး စက္ကန့် (၂၀) ကြာ မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်ထဲ ထည့်ထားပါ။
သင့်ရဲ့ လက်ချောင်းတွေ(သို့) brush နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဦးရေပြားပေါ်မှာ လိမ်းခြယ်ပေးပါ။
မိနစ် ၃၀ ထားပြီး ခေါင်းလျှော်ရည်နဲ့ လျှောပါ။
၈။ Green Tea
Green tea က ဆံပင်ကျွတ်တာကို သက်သာစေပြီး ဆံပင်ကြီးထွားမှုကို အားပေးပါတယ်။ ၎င်းကို သောက်ခြင်း (သို့) ဆံပင်ကို သုတ်ခြင်းဖြင့် ၎င်းရဲ့ antioxidant ဂုဏ်သတ္တိကို ခံစားနိုင်ပါတယ်။
green tea ၁ အိတ် (သို့) နှစ်အိတ်ကို ရေဆူဆူထည့်ထားသော ဖန်ခွက်ထဲသို့ ထည့်ပါ။
၅ မိနစ်ခန့်စိမ်ပြီး လုံးဝအေးသည်အထိ (သို့) ခပ်နွေးနွေးဖြစ်သည်အထိ ထားပါ။
ဆံပင်ကို လျှော်ပြီး green tea နဲ့ သုတ်ပါ။
ဆန်ရည်ဟာ ဆံပင်တွေကို သန်စွမ်းစေပြီး ပျက်စီးနေသော ဆံသားတွေကို ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးနိုင်ပြီး အနာဂတ်မှာ ဆံပင်ပျက်စီးခြင်းကနေ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
ဆန် ၁ ခွက်ကို စင်ကြယ်အောင်ဆေးပြီး ၎င်းရေကို ခံထားပါ။
ဆန်ရည်ကို ၁၂ နာရီကနေ ၂၄ နာရီအကြာ ထားပြီး သတ္ထုဓာတ်နှင့် ဗီတာမင်တွေထွက်လာပါစေ။
၎င်းရေနဲ့ သင့်ဆံပင်ကို လျှော်ချပြီး ၂ မိနစ်ကနေ ၅ မိနစ်အထိ ထားပြီးနောက် ဆေးချပါ။
ဆံပင်တွေမှာ အားရပါးရနယ်ပြီး လိမ်းပေးမယ်ဆိုရင် ဗီတာမင်နှင့် ပရိုတင်းကောင်းကောင်းရစေပြီး ဆံပင်ကို သန်စွမ်းပျော့ပျောင်းစေနိုင်ပါတယ်။
နွားနို့၊ ပျားရည်၊ စတော်ဘယ်ရီနှင့် ငှက်ပျောသီးတစ်ချို့ကို ရောနှောပါ။
ပြီးနောက် ၎င်းကို သမအောင်မွှေးပြီး သင့်ခေါင်းမှာ လိမ်းခြယ်ပါ။
မိနစ် ၂၀ ကနေ ၃၀ အထိထားပါ။ ၎င်းနောက် ရေဆေးပါ။